Ogaysiis Muhiim ah – Rasaasa News
Oct 22, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo
Waxaa dhamaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya la Ogeysiinayaa in Damiile Jwxo-shiil, oo ahaa hogaankii Jwxo ee sanadihii 1998 -2006, uu yahay ninkii sababay in uu ururka Jwxo soo wajaho burbur aan wax ka qabad lahayn, oo kaga yimid dhinacyada; qabyaalada, xukun jeclaysi, dhaqaale lunsi, kalsooni daro, taageerada dadweyne la,aan, liciif cududa ciidan iyo dhinaca siyaasada, waxaana masuul ka ah arimahaas Jwxo-shii oo si cad ugu dhaqmay.
Jwxo-shiil, waxaa uu fursada TV Universal siiyey ku xusayaa dhalashadii Kacaankii 21 Oktober 1969, kaas oo soo barbaariyey, waxaa kale oo uu rabaa habeen dambe in uu soo horfadhiisto TV caalamiga ah ee Universal, isaga oo diyaar u ah in la weydiiyo dhibaatooyinkii uu u gaystay jiritaanka Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo] isaga oo aan dan iyo aabo ka lahayn halganka iyo umadiisa.
Jwxo-shiil, oo dunuubta uu ka galay dadweynaha Somalida Ogadeeniya ay ka badan yihiin kuwa ay gaysteen ciidamada Itobiya, marka laga eeggo aaminaada ay dadweynuhu u qabeen Jabhada. Jwxo-shiil, waxaa uu masuul ka yahay dunuubta aan sheegnay si toos ah iyo si dadbanba, si khaas iyo si guudba, dunuubta ugu waaweyn ee loo haysto ayaa waxaa ka mid ah;
Haween Ilmooley ah
N/hurayaal ONLF ah
N/hurayaal JXSG ah
Daweyn reer Miyi ah
Gubid ula kac ah:
Gaadiid xamuula oo dadweyne,
Gadiid Biyo dhaamiya
Hadaba, Jwxo-shiil oo galay intaas oo dambi ah, ayaa waxaa uu doonayaa in uu soo fadhiisto TV caalami ah oo ku baxaya afka Somaliga isaga oo leh ha la I weydiiyo su,aalo ku saabsan halganka iyo wixii aan qabtay.
Waxaanu dadweynaha Somalida Ogadeeniya ku boorinaynaa in ayna ka gaabsan dhibaatooyinka uu gaystay Jwxo-shiil, kolba hadii uu ka xishoon waayey, in uu soo hor fadhiisto dadweynihii uu waxaas oo dhibaato ah u gaystay, waa xaq in galka laga siibo.
Su,aalaha la weydiinaayo waa in ay ahaadaan waxyaabaha dhabta ah ee uu galay, sida sheegashada sharci darada ah ee uu ku sheeganayo gudoomiye iyo dilka N/hurayaalka.